【अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी साक्षात्कार】 मेई युनिवर्सिटी (एमआईआईजी यूनिभर्सिटी) |जापान गाइड र सूचना|アクセス日本留学
UPDATE | जनवरी29, 201 9
"अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अन्तरवार्ता " मा जापानको उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा पढ्दै गर्नु भएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सिनिएर हरूलाई विभिन्न कुराहरु सोध्ने गर्दछौ । विद्यालयको छनौट गर्दा विद्यालय प्रबेश को लागि गरिने तयारी अथवा विद्यालय प्रवेश पछि पढ्ने तरिकाहरु को बारेमा सिनिएर को अनुभबको प्रयोग गरौं।
इन्टरप्राइज एडमिनिस्ट्रेशनको4अर्ब स्नातक
किम सन-स्यान (चीनबाट)
हामीले विश्वविद्यालयलाई गुजरने कोसिस गर्यौँ
मेई युनिवर्सिटीका लागि उद्देश्य गर्नेहरूलाई
कृपया मलाई जापानमा विदेश बाहिर पढ्नको बारेमा सोच्ने मौका बताउनुहोस्
जूनियर हाई स्कूलका विद्यार्थीहरूले भर्खरै6वर्षको लागि जापानी फेसबुक म्याग्दी "ViVi" पढ्दै गरेको कारण मैले जापानको चासो राखेको थियो। त्यस पछि, मेरो गृह देशमा बितेका वरिष्ठ उच्च विद्यालय विद्यार्थी जापानमा धेरै अध्ययन गरे, त्यस्ता वरिष्ठ ब्लगहरू हेर्दै, मलाई लाग्यो कि मैले राम्रो समय पाएको छु र जापानको मनपर्दो ठूलो प्लस हो यो भयो।
तपाईंले जापानी अध्ययन गर्दा कहिले सुरु गर्नुभयो?
मैले जापानमा चाँडै जापानमा पढाई सुरु गरें।
कोटाना को जापानी अध्ययन गर्दा कडा समय लाग्न गाह्रो थियो। पहिलो हाफ, म सबै कुरा गर्न सक्षम हुंदैन ... आधी वर्षको लागी मैले जापान आइपुगेको छु, र त्यस समय मैले कटाकाना पढ्न सकेन र यो सुन्दर थियो।
जब मैले जापानी राम्ररी बुझिनँ, म सामानको डिलिवरीमा थिएँ। म घर जान्छु जब मेरो अनुपस्थिति सम्पर्क फारम आउनेछ जब म एउटा अनुपस्थिति सम्पर्क फारम प्राप्त गर्दछु भने के गर्न सक्दिन। त्यस पछि, मलाई तपाईंलाई कल गर्नु पर्छ, तर म यसको सहयोग गर्न सक्दैन किनभने मैले जापानी भनेर बुझिन। त्यस समयमा, मैले एक मित्रलाई सल्लाह दिए जुन जापानी बोल्न सक्छ र मलाई मद्दत गर्न सक्छ।
यसबाहेक, जब म रेस्टुरेन्टमा जान्छु, म केहि हदसम्म परेशान थिएँ। मलाई सुशी धेरै मन पर्छ, तर (मूलतया मैले जापानी राम्रोसँग बुझिनँ) मूलतः मैले केवल मेनु तस्बिर पाउनुभयो। मैले त्यो दिन गल्ति गरेँ र एक पसलमा भर्खरै हिरागाना र काटाकाना लेखिएको छ, जसले एक पटक मैले मेनु पढ्न सजिलो तुरुन्तै सोधें, सबै कि बाहिर बाहिर निस्कन सक्दिन! म दुखी थिएँ (कष्ट मुस्कान)।
जापानी जापानी स्कूल बाट स्नातक भएपछि तपाईले आफ्नो क्यारियरको बारेमा सोच्नु भयो?
सबैभन्दा पहिला, मैले पहिलो वर्षको लागि मात्र जापानी अध्ययन गर्न केन्द्रित गरें, र दोस्रो वर्ष पछि मैले कलेजमा जान र जानकारी सङ्कलन गरेन।
वास्तवमा, सुरुमा, म साँच्चै फैशनीमा रुचि राख्दछु, त्यसैले मलाई एक व्यवसायिक स्कूल जाने चिन्ता थियो जहाँ मैले फैशन पढ्न सक्थे, तर ... मलाई धेरै चिन्ता थियो। तर, मेरो साथी एक क्र्याम स्कूलमा जान थाले जस्तो लाग्यो कि मलाई धोखा गरियो र एक क्र्याम स्कूल सँगै जान्छ, उत्कृष्ट वरिष्ठहरु बाट धेरै उत्तेजना प्राप्त भयो, र मेरो आशिष् एक विश्वविद्यालयमा फर्केर गयो। यो थियो। मैले भेट्टाएको शिक्षकले मलाई दृढ तुल्यायो कि "मेरो दिमाग निश्चित हुन सक्नेछ यदि कसैलाई कडा प्रयास गर।" त्यसोभए, मैले सोधे कि म पनि राम्रो प्रयास गर्नुपर्छ।
बेशक, मैले मेरो आमाबाबुलाई सल्लाह दिएँ। आमाबाबुले जस्तो लाग्छ, म सट्टा फैशन भन्दा विश्वविद्यालयमा जान्छु। त्यसैले, जब म भन्न चाहन्छु कि म फैशन गर्न चाहन्छु, केहि हदसम्म असहमत छैन, तर मलाई लाग्यो कि यदि व्यक्तिको इच्छा बलियो थियो। तर अन्त मा मैले भन्यो "म कलेज जान चाहन्छु, म मेरो सबै भन्दा राम्रो गर्नेछु!"
परीक्षा लिनको लागी विद्यालय खोज्नको लागी कुनै कठिनाइ छ?
मेरो मामला मा, मैले विश्वविद्यालय को आधिकारिक वेबसाइट देखे र वेबसाइट को हरेक पल्ट आवश्यक जानकारी खोज्दै थिए। मैले परीक्षा लिइसकेपछि, मेरो स्कूलमा प्रवेश गर्न वेबसाइट (जस्तै アクセス日本留学 ) थिएन, तर यदि यो प्राप्त भएमा यो धेरै उपयोगी छ। किनभने विभिन्न जानकारी सङ्कलन गरिन्छ। चूंकि मैले क्र्याम स्कूलमा जानुभएको विश्वविद्यालय जानकारीको बारेमा भनेँ, मैले इन्टरनेटमा "इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ युनिवर्सिटी" द्वारा एक-अर्कालाई खोजी गरें र प्रत्येक र सबैलाई गए। यो खराब क्षमता (हँसिलो) हो।
विद्यालय खोज अवस्था निजी हो। मैले गणित (EJU मा) प्राप्त गरेन, त्यसैले मैले मात्र एक निजी स्कूल देखेको थिएँ। त्यसोभए, मैले निर्णय गरे कि मैले कति पटक स्कूलहरूको तुलना गरेँ।
त्यसैले कृपया मलाई मेज युनिवर्सिटीको उद्देश्य लक्ष्य गर्ने मौका दिनुहोस्।
मेची विश्वविद्यालय चुनेको धेरै कारणहरू छन्, तर ... सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो कि वैशाखिकरण धेरै बढ्दै छ, दोस्रो बिन्दु भनेको छ कि विद्यार्थीहरूको लागि समर्थन धेरै दयालु छ। उदाहरणको लागि, बाह्य विद्यालय जीवन, रोजगारी, सहायता, (एक्सचेंज) विदेशबाट अध्ययन नगरी, समस्या वा सहयोगको परामर्श धेरै दयालु हो। तेस्रो उच्च प्रोफाइल हो। र अन्तमा, स्थान राम्रो थियो, मैले सोचे कि यो नौकरी को शिकार मा यो धेरै उपयोगी हुनेछ।
मेजी विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कति लामो छन्?
जापानीहरूको विदेशीको अनुपात मेरो कक्षाको लगभग 30 विद्यार्थी हो, तर तिनीहरूमध्ये लगभग3वा4अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू छन्, जुन कुलको लगभग 10% हो। राष्ट्रको आधारमा राष्ट्रीयता केही फरक छ, तर यो कक्षामा छ भने चीन र दक्षिण कोरियामा रहेका मानिसहरू छन्। केही विद्यार्थीहरू युरोप र अमेरिकाबाट आएका थिए ...... फ्रान्स, रूस र इटलीले तेस्रो पदकको रूपमा सुरगाडाई परिसरमा आएर।
(संचारको बारेमा) मेरो मामलामा, म मूलतः जापानी मा बोल्नु भएको कुरा बोल्दै। समेत जब अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गरिरहन्छ। सूगैडाई परिसरमा अंग्रेजीमा धेरै पाठहरू छन्, र रूस र फ्रान्सेलीका विद्यार्थीहरूले विनिमय अध्ययनको अध्ययन गरिरहेका छन्, त्यसैले म पश्चिमी विद्यार्थीहरूसँग अंग्रेजीमा बोल्छु।
कृपया मलाई मेई युनिवर्सिटीमा तपाईंको स्कूलको जीवनको बारेमा बताउनुहोस्
जब मैले पहिलो पटक कलेजमा कक्षाहरू पढे, म कताकता भन्दा बढी उत्साहित थिएँ।
मलाई चिन्तित थियो, पक्का। जब म जापानी जापानी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ मात्र विदेश विद्यार्थी साथीहरू थिए, त्यसैले मैले विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेपछि जापानी मित्रहरूसँग कुराकानी गरें, त्यसैले मलाई चिन्तित थियो कि मैले पहिलो पटक साथी बनाउन सक्छु। अहिले, आधा जापानी र विदेशी मित्रहरू वरिपरिका छन्।
मैले सोचेँ कि म विदेशमा विदेश जाने "एक्सचेंज अध्ययन अध्ययन" को लागि विदेश जान चाहन्छु र मेई युनिवर्सिटीले विदेशमा अध्ययन अध्ययन गरेको छ ताकि मैले फ्रान्सेली व्यवसायमा एक विद्यार्थीको रूपमा तेस्रो वर्षमा छु। म विदेश अध्ययन गर्न आधे वर्षको लागि विद्यालयमा गएको छु।
मैले सुरुमा अंग्रेजी गर्न सकेन, तर मैले नामांकन गरेपछि मैले विनिमय अध्ययन गर्ने निर्णय गरे (विदेशमा अध्ययन गर्ने आदानप्रदान) र अंग्रेजी अध्ययन गर्न थाले। तर नामांकनको समयमा म सबै गर्न सक्दिन र TOEIC धेरै शर्मिला छ र मैले अंकहरू भन्न सक्दिन ....... जब मैले आदानप्रदानको लागि छनोट परीक्षाको माध्यमबाट दुई वर्ष थें, मैले दुई वर्षमा अङ्ग्रेजीलाई केहि समय अध्ययन गरे।
म "अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी एसोसिएशन" हो, तपाईं कस्तो प्रकारको गतिविधि गर्नुहुन्छ?
म चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सम्मेलनमा धेरै काम गर्दैछु। हामी विश्वविद्यालयको चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको प्रवेशमा स्वागत स्वागत गर्छौं र त्यहाँबाट हामी सँगै पाठ्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछौं र तालिकाबद्ध तालिकाहरू व्यवस्थित गर्दछौं। उदाहरणको लागि, यो विषय एकाइमा प्राप्त गर्न सजिलो छ, जस्तै ट्यूटोरर। नियमित रूपमा बारबेक्यू जस्तै घटनाहरू पनि छन्।
साथै, जापानी भाषा स्कूलका विद्यार्थीहरूको लागि हामी नि: शुल्क प्रवेश परीक्षा प्रशिक्षक जस्तै केहि गरिरहेका छौं। म व्याख्यान दिन्छु, काउन्टरमेसहरू र परीक्षाहरूमा सल्लाह दिन्छु। मैले पनि चुरोट साक्षात्कार र त्यसमा पनि अभ्यास गरे।
विद्यार्थीहरूको प्रश्नहरू परीक्षाको बारेमा धेरै कुरा गर्छन्। "म ईजेयूमा एक रन स्कोर थियो, तर के तपाईं मेजी युनिवर्सिटीलाई स्वीकार्न सक्नुहुन्थ्यो?" वा " प्रवेश परीक्षा लागि कस्तो प्रकारका कामहरू गर्नुभयो?"
गतिविधि मेरो नामांकनको सालबाट सुरु भयो र सुरुमा अशुद्ध थियो, त्यसैले मैले यसलाई शुरुमा सीमित विद्यालयहरूको प्रयास गरेँ। यो एभ लगाउँदै हामी आफैं संग जाँदै थिए।
वास्तवमा, वास्तवमा मैले मेई युनिवर्सिटीमा पनि आफैंलाई कडा परिश्रम गरें, त्यसैले मलाई मेई युनिभर्सिटीमा कक्षामा भाग लिन अनुमति दिइएको थियो, मैले त्यस्ता तस्विरहरुलाई त्यतिकै हेरिदिएँ र मैले सिमुलेटेड साक्षात्कार चलाएको छु र बचत भएको छु, म पनि सोचा कि म माई विश्वविद्यालय को शुभकामना को रूप मा फिर्ता दिए पछि धेरै विद्यार्थीहरुलाई शक्ति दिन चाहान्छु। साथै, क्र्या विद्यालयले पैसा खर्च गरे पछि, हामी क्र्याम स्कूलमा भाग लिन सक्दैनौं जो बच्चाहरूको लागि अनैतिक थियो महसुस गरे (निजी प्रशिक्षकको विश्वविद्यालय विद्यार्थीहरू एक-अर्काको नजिक छैन), त्यसैले हामीले यस्ता गतिविधिहरू सुरू गरे।
म जापानमा एक नौकरी प्राप्त गर्न जाँदैछु, जापानमा तपाईंको काम कसरी खेल्दै थियो?
यो गम्भीर थियो। मैले सोचेँ कि यो मर्न गाह्रो हुनेछ। विशेष गरी मलाई विश्वास लाग्यो कि साहित्य प्रणाली को विद्यार्थी र विज्ञान स्नातक नौकरी को शिकार को विद्यार्थीहरु को एकदम फरक फरक छ। निर्माताको अवस्थामा, साहित्यमा केही बच्चाहरू होइनन्? त्यसैले, मैले महसुस गरे कि म्याग्दी उच्च छ र प्रतियोगिता पनि तीव्र छ।
यो निश्चित प्रक्रियासँग गर्न गाह्रो थियो। म ब्रीफिङ सत्रमा गए र ओबीओजी भ्रमण भ्रमण गरें, यो वेब परीक्षण थियो। चीनमा साक्षात्कार गर्न सजिलो छ, दुई चोटि पनि एक पटक ... किनभने मेई युनिवर्सिटीमा धेरै स्नातकोत्तरहरू छन्, त्यहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा धेरै ओबीओएलहरू छन्, त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो विश्वविद्यालयको छनौट गर्दा यो निकै महत्त्वपूर्ण अवस्था हो।
● हामी विश्वविद्यालयलाई गुजरने को लागी निस्कन्छौं
तपाईं कुन प्रकारका चीजहरू प्रवेश परीक्षाको लागि अध्ययनमा तपाईंको प्रयास राख्नुहुन्छ?
प्रवेश परीक्षाका लागि अध्ययन गर्न विशेष जोड राख्ने वस्तुहरू, "ईजेयू" परीक्षा, हामीले "जापानी" विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रयास राख्यौं।
किनकि, जापानी विषयहरूमा केवल 400 बिन्दुहरू जब समग्र अनुपातमा हेर्छन्, यो एकदम ठूलो अनुपात हो, त्यसैले यदि तपाईं जापानी बोल्न सक्नुहुन्न भने, अन्य विषयहरूसँग तपाईं कसरी राम्रो पाउन सक्नुहुनेछ, यो धेरै खराब छ। मैले सोधे कि यो परिणाम हुनेछ। त्यसकारण, मैले जापानी विषयहरूमा केही प्रयास गरिरहेको थिएँ।
यो एक क्रैम विद्यालयमा लाइब्रेरीमा सम्पूर्ण दिनको लागि आत्म-अध्ययन छ। मैले लगभग हरेक घण्टा लगभग हरेक दिन अध्ययन गरे। म घर जाने पछि अध्ययन गर्दैन। नाटक (जापानी अध्ययन गर्न) विश्रामको लागी महसुस गर्दैछ, त्यसैले म घर जान्छु जब साँच्चिकै यो गर्न चाहन्छु। (हां)।
त्यसोभए, के तपाईंले मेजी युनिवर्सिटी पास गर्न उत्साहपूर्वक काम गर्नुभयो?
मैले यकीन गरे कि EJU को कडा काम को अध्ययन गरियो र त्यो आवेदन, आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक राखिएको थियो। अन्तमा मैले सोधे कि मैले मेरो वरिष्ठहरुलाई सोध्न र प्रवेश परीक्षा लागि जानकारी सङ्कलन गर्न आग्रह गरे।
फाइलिङको लागि तयारी लगभग एक वर्ष हो। मलाई लाग्छ कि यो ईजेयू को तयारी मा लगभग3महिना पछि दायर गरिनेछ, यसैले लगभग आधा वर्ष या एक साथ छ।
मेजी युनिवर्सिटीको सन्दर्भमा, छनौट गर्ने कारणमा जोड दिएका धेरै आवेदनहरू (आवेदन)। मैले सोधे कि मेजी विश्वविद्यालय धेरै दयालु थियो, मैले मेरो पहिचानको साथ जाँच गरें जब मैले अपर्याप्त कागजात पाएको छु, म पुष्टि गर्नेछु। अन्य विश्वविद्यालयहरु को मामला मा, अपर्याप्तता को समयमा बाहिर। मेजी विश्वविद्यालयको अवस्थामा, मैले सधैं उहाँलाई सम्पर्क गरे, पुष्टि गरे, मैले सोचे कि यो धेरै दयालु थियो, किनकि मैले पर्खेको केही समय सीमाहरू छन् किनभने मैले पर्खें।
● तिनीहरूका लागि मेई युनिवर्सिटीका लागि उद्देश्य
अन्तमा, कृपया मेजी युनिभर्सिटीका लागि लक्षित विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह दिनुहोस्!
यो जापानी प्रवीणतामा रहन्छ। किनभने जापान सधैं ईजेयू परीक्षाको लागि आवश्यक छ, जापानमा बस्न विश्वविद्यालय र व्याख्यान प्राप्त गरेपछि। यो आधारभूत आधार हो। यसको अतिरिक्त, चूंकि मलाई लाग््छ कि केहि मान्छे जापान मा रोजगारी को खोज रहे हो, मलाई लाग््छ कि जापानी क्षमता बिल्कुल उस समय जरूरी छ, त्यसैले मलाई लाग््छ कि यो बेहतर हुनेछ कि जापानी क्षमता संग जोडने को क्षमता हो। निस्सन्देह, न केवल जापान र प्रवेश द्वार लिनको लागी जापान पनि, म तपाईलाई बोल्ने कुरामा ध्यान दिन चाहान्छु।
(कवरेज / फोटोग्राफी: डिसेम्बर 1 9, 2018)
मेई युनिवर्सिटी (मेईज यूनिभर्सिटी)
"अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा कार्यालय"
ग्राउण्ड फ्लो 2-1, कानेडा सबवेई, चिइडा-कि, टोक्यो 101-8301, टोक्यो
जापान भित्रबाट: टेलिफोन 03-3296-4144 / फैक्स 03-3296-4360
विदेश बाट: टेलिफोन + 81-3-3296-4144 / + 81-3-3296-4360